musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kuvhuna Grenada Nhau » Sandals Grenada muSt George kuvhurazve March 31
Kuvhuna Grenada Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Caribbean • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Investments • Nhau Dzakanaka • nhau • Kuvakazve • Resorts • Vanodanana Michato Honeymoons • Shopping • ushanyi • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • Akasiyana Nhau
Mumoyo wePink Gin Beach yakasarudzika pane chisingawanzo chitsuwa paradhiso uko kunhuhwirira kunodhaka kwezvinonhuwira uye maruva anotonhora anoita mushonga unodakadza wekudanana, Sandals Grenada ichave ichizarurazve musi waKurume 31 nzvimbo yekutora iyo yatora zvakanakisa zvese kugadzira zvese. chiitiko chitsva chose chinobatanidza… icho chinotora vaenzi kupfuura zvisingatarisirwi.
Shangu nyowani nyowani-inosanganisirwa nzvimbo kuGrenada yakagadzira inoshamisa vanhu vakuru-chete yekutandarira isina chero chinhu chakamboitika.
Kubva pamadziva mudenga uye dzimba dzekugara mumadziva ekushambira, Sandals inonunura zvisingatarisirwe.
Kunyangwe iri kuungana kwechic, inonakidza show, spa nguva kana tenisi husiku, Sandals Grenada inotora vashanyi kupfuura kwavo kufunga kwavo.
Inozivikanwa se "Chitsuwa cheSpice" Grenada iparadhiso inoshamisa zvechokwadi, iyo inongoitika kuva nzvimbo yakanaka yeSandals Resort. Ichi Chitsuwa cheSpice chinozivikanwa nekunaka kwayo kunoshamisa, mahombekombe akachenuruka, makungwa asingatendeseki ebhuruu, uye dura rechokwadi rezvinonhuwira - sinamoni, ginger, clove, uye kunyanya nutmeg, zvinonhuwira zvakanyanya kutsvakwa.
Kuzvidza musangano wese wedhizaina dhizaini, Sandals nyowani nyowani-inosanganisirwa nzvimbo kuGrenada inotora hunyanzvi kupfuura nzvimbo yekufungidzira kugadzira yakasarudzika vanhu vakuru-chete nzvimbo isina kufanana nechero chinhu chakamboitika kubva kumadziva mudenga nemakamuri ekugara mumadziva ekushambira kusvika kune epasina kunyura madziva, mapopoma emvura, uye madziva erwizi.
Kubva panguva inosvika vashanyi, maSandals anotanga kutarisira vashanyi vayo pavanenge vachizorora uye vachinakidzwa nekushushikana-kwepasina nekumira-kusingamire airport airport kuchinjisa iine mhepo yekutonhodza uye zvigaro zvakapamhama zvigaro. Kana vashanyi vanogona kusarudza kusvika nesitayera mune yakasarudzika mota yemhando yepamusoro kubva kune yekutanga-kirasi ngarava iyo inowanikwa kune imwezve mutengo.
Makamuri asingaenzanisike uye masuti
Kubva pamasuti ane madziva mudenga kuenda kune dzimwe nyika Rondoval suites-in-the-round kuenda kuSwim-up Suites ine Runyararo Soaking Tub, makamuri nemasites zvinopa zvakanakisa mukuvandudza uye zvakasarudzika zvinhu zvinosanganisira infinity-kumucheto pombi dzemadziva pane makuru mabalkoni, Spa -style dzimba dzekugezera, uye Butler Elite sevhisi.
PaSandals Resorts, kugadzira kubatana kwakakodzera kunogara kuri pamunwe wevaenzi. Kugara wakabatana nevadikani kuri nyore kupfuura nakare kese paSandals Resorts. Iko kune yemahara yeInternet kuwana mukati meiyo zororo kubva kune chero chishandiso, chero kupi panzvimbo yekutandarira kusanganisira ese makamuri.
Kudya kusingagumi kwakanaka mumaresitorendi gumi
Chiitiko chekugadzirira paSandals Grenada hachifananidzwe muCaribbean, kupemberera epicurean hupfumi kubva mumigwagwa yeRome kune iyo inofadza bounty yegungwa kuSandals yekutanga yechokwadi imba yekuchengetera.
Kubatana kwakasarudzika naRobert Mondavi Twin Oaks Wines inosimudza muyero wewaini "yakasanganisirwa" inodururwa paSandals zvese-zvinosanganisirwa nzvimbo dzekutandarira. Zvakare zvinopihwa sarudzo inoshamisa yewaini inotengeswa mune yeManeja uye Sachigaro zvinyorwa.
Iwo mabhawa akagadzirwa kuti ave chaiko kwaanofanirwa kunge ari - chaipo pamahombekombe uye akananga pamusoro pegungwa - kupa vashanyi chiitiko chechokwadi cheichi chitsuwa.
Yakakurira muJamaica's misty Blue Mountain renji, kofi yeJamaica Blue Mountain ine yakasarudzika yepamusoro flavour uye inosanganisirwa munzvimbo dzese dzakasarudzika maresitorendi, maFrench -style maresitorendi, lounges, anozvishandira-wega makofi kofi, uye yekufadza imba yebasa.
Dzisingagumi nzira dzekuvaraidzwa pasi uye nemvura
Kubva pakuungana kwechic kusvika kumitambo inonakidza, hapana anokanda pati yakaita semaSandals nekuti pano husiku hwese mhemberero. Kune tenesi, masikati neusiku, pamatare akavhenekerwa akakomberedzwa nemaruva anonhuwirira anotonhora uye nemhepo inotonhorera inoyerera nemumiti mirefu; croquet pane emerald-mavara manicured lawn; nevolleyball pa mutsago-nyoro jecha. PaSandals, hapana miganho kune izvo zvaunogona kutamba.
Island Routes inopa yakasarudzika mafaro ekushanya ayo anotangira kubva zvachose anonakidza kune anofadza kugara. Zvisinei nekukurumidza kwakadii kunodiwa, vashanyi vanowana ruzivo rwekunze uye nemaonero matsva nezveparadhiso inoyevedza inonzi neSandals kumba.
Nzvimbo dzepuru dzakanyatsofungidzirwa kuti dzitore zvizere nzvimbo yechitsuwa inotonhorera, uye hapana nzvimbo iri pachena kupfuura padziva remahombekombe egungwa. Masikati, iwo maonero ari kungoshamisika nedziva risingaperi-rakatenderedzwa richisanganiswa mushe mushe mushe. Uyai husiku, makomba emoto echic uye maficha emoto anoshandura dziva rive imba yekutandarira yekunze.
Ngarava uende uye uzviwanire mune yakawanda yemitambo yemvura inosanganisira. Nezvigadzirwa zvepamusoro-zve-mutsetse, vashandi vehunyanzvi, nenzvimbo dzisingaenzanisike dzinopisa, vashanyi vanogona kusarudza kubhururuka pamusoro pemvura - inofambiswa nemhepo, mota, kana simba remhasuru - kana kukwira pasi penzvimbo yepamusoro.
Scuba diving paSandals zvechokwadi inopa vashanyi zvakanakisa mumidziyo, vashandi, uye nzvimbo dzisingadaviriki dhivha - dzese dzakabatanidzwa. Kubva kune vanodzora, BCDs, masiki, snorkels, zvimbi, uye matangi kuenda ku state-of-the-art mapatya dhiziri Newton zvikepe uye nyanzvi kutungamira kubva kuPADI yakasimbiswa dive nyanzvi, maSandals anotarisira zvese.
Basa risingaenzanisike, kunyangwe mudiri
PaSandals, zvese zvisingabatsiri zvinosanganisirwa. Kubva pamabherohops kusvika kune vanomirira kune vatengi, matipi ese anotarisirwa. Nakidzwa neSandals Resorts indasitiri-inotungamira yekugamuchira vaeni uye sevhisi yakasarudzika uye siya chikwama chako kumba. Vatengesi vega chete ndivo vanobvumidzwa kugamuchira matipi.
Sandals 'zvisati zvamboitika Butler Service, inongowanikwa chete mune yakasarudzika yepamusoro masuti, inopa vashanyi vanonzwisisa vane mwero wakakura kwazvo webasa neumbozha, uko kwese kudikanwa kuri kutarisirwa.
Kupomba uye kudanana
Iyo yakasarudzika Inosanganisirwa Chiitiko inotangira kuClub Sandals, nzvimbo inopfachukira nerunoshamisa rombo, zvakasarudzika zviitiko, uye yakasarudzika sevhisi kune concierge vashanyi veSandals Resorts. Kugamuchira vaeni kwechokwadi kunotsanangurwazve, zvichibvumira vashanyi kunakidzwa nebasa reumwe-ne-rimwe uye zororo rakazara mukunyaradza kweyekutandarira yekutandarira.
Tsika dzechinyakare dzeEuropean dzakadudzirwa zvakare neakasarudzika eCaribbean flair paRed Lane Spa yakasarudzika paSandals Grenada. Vashanyi vanozowana yakasarudzika pfungwa yekudzikama nesarudzo yemamwe masevhisi akaomeswa nemiti yezvigadzirwa, kushandura kuda kwekunaka kwemukati kuita rwendo rwekusazvitsvaga-kusingaperi.
Yemuchato wese-unosanganisira kuenda kumuchato paSandals unobvisa kunetseka pakuronga, uchipa vaenzi nguva yakawanda yekunakidzwa nenguva. Zvakanakisisa pane zvese, kunyangwe muchato unosanganisirwa!
Kwangosara mavhiki mashoma kuti vaende, Sandals Grenada iri kuputika pamatanho nekugamuchira nzira dzekunakidzwa nezororo nenzira yaraifanirwa kuve - nezvose zvinhu zvakachengetwa uye yakachena inotapira inonakidza kutandara uye kupuruzira uye hongu, izvo zvisingatarisirwi.